အႏုပညာရွင္ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ ေၾကာ္ျငာရိုက္ကြင္းေပၚက ေပ်ာ္စရာေလးေတြကိုခ်ျပလာခဲ့တဲ့ ခင္ဇာျခည္ေက်ာ္ရဲ့ ဗီဒီယိုေလး…. – Cele Snap
အႏုပညာရွင္ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ ေၾကာ္ျငာရိုက္ကြင္းေပၚက ေပ်ာ္စရာေလးေတြကိုခ်ျပလာခဲ့တဲ့ ခင္ဇာျခည္ေက်ာ္ရဲ့ ဗီဒီယိုေလး….
ပရိသတ်ကြီးရေ.. သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးခင်ဇာခြည်ကျော်ကတော့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းပြီး သဘာဝကျကာ ပီပြင်တဲ့ဟန်ပန်တွေကြောင့် အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်စွာနဲ့ ဇာတ်ကားတွေများစွာ ရိုက်ကူးထားသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်.အနုပညာအလုပ်တွေ ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းက လုပ်ဆောင်လာတဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော်ကတော့ ကျော့ရှင်းတဲ့အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကာ အရွယ်တင်နုပျိုနေပြီး ယနေ့အချိန်ထိလည်း အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို အချစ်ပိုစေသူပါပဲ..။
ပရိသတ်အချစ်တွေကို အခိုင်အမာသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ မဇာလေးကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ကာ လတ်တလောမှာလည်း ချစ်ရတဲ့ အနုပညာရှင်မောင်နှမတွေနဲ့ ကြော်ငြာရိုက်ကွင်းပေါ်က ပျော်စရာလေးတွေကို ဝေမျှလာပါတယ်နော်..။ချစ်ခင်ရတဲ့ အနုပညာရှင်မောင်နှမတွေနဲ့အတူ ကြော်ငြာတွေရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပြီး ကျော့ရှင်းပြီး လှရက်လွန်းနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ မြင်သူတိုင်းကို အချစ်ပိုစေမယ့် မဇာလေးကိုတော့ ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးနေကြမှာပါနော်..။
ဒီနေ့ အနုပညာ မောင်နှမတွေ ဆုံကြတာပျော်လိုက်တာ😍..” ဆိုပြီး အနုပညာမောင်နှမတွေ ပျော်ပျော်ပါးပါးဆုံကာ အလုပ်တွေအတူတွဲဖက်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို မဇာလေးက ပရိသတ်တွေကို ဝေမျှထားတာပါနော်..။သူမရဲ့ အဲ့ဒီ့ပို့စ်အောက်မှာတော့ အရွယ်တင်နုပျိုမှုတွေနဲ့ လှသွေးကြွယ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချောခင်ဇာခြည်ကျော်ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေကလည်း သဘောကျကာ အချစ်ပိုအားပေးနေကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်နော်..။
ပရိသတျကွီးရေ.. သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခငျဇာခွညျကြောျကတော့ သရုပျဆောငျကောငျးပွီး သဘာဝကကြာ ပီပွငျတဲ့ဟနျပနျတှကွေောငျ့ အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျစှာနဲ့ ဇာတျကားတှမြေားစှာ ရိုကျကူးထားသူပဲ ဖွစျပါတယျနောျ.အနုပညာအလုပျတှေ ဆယျစုနှစျတှကေတညျးက လုပျဆောငျလာတဲ့ ခငျဇာခွညျကြောျကတော့ ကြော့ရှငျးတဲ့အလှတရားတှကေို ပိုငျဆိုငျထားကာ အရှယျတငျနုပြိုနပွေီး ယနေ့အခြိနျထိလညျး အနုပညာအလုပျတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေို အခစြျပိုစသေူပါပဲ..။
ပရိသတျအခစြျတှကေို အခိုငျအမာသိမျးပိုကျထားတဲ့ မဇာလေးကတော့ အနုပညာအလုပျတှကေို ဆကျတိုကျလုပျဆောငျကာ လတျတလောမှာလညျး ခစြျရတဲ့ အနုပညာရှငျမောငျနှမတှနေဲ့ ကွောျငွာရိုကျကှငျးပေါျက ပြောျစရာလေးတှကေို ဝမြှေလာပါတယျနောျ..။ခစြျခငျရတဲ့ အနုပညာရှငျမောငျနှမတှနေဲ့အတူ ကွောျငွာတှရေိုကျကူးနတောဖွစျပွီး ကြော့ရှငျးပွီး လှရကျလှနျးနတေဲ့ ပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူ မွငျသူတိုငျးကို အခစြျပိုစမေယျ့ မဇာလေးကိုတော့ ပရိသတျတှခေစြျခငျအားပေးနကွေမှာပါနောျ..။
ဒီနေ့ အနုပညာ မောငျနှမတှေ ဆုံကွတာပြောျလိုကျတာ😍..” ဆိုပွီး အနုပညာမောငျနှမတှေ ပြောျပြောျပါးပါးဆုံကာ အလုပျတှအေတူတှဲဖကျလုပျဆောငျနတေဲ့ အမှတျတရလေးတှကေို မဇာလေးက ပရိသတျတှကေို ဝမြှေထားတာပါနောျ..။သူမရဲ့ အဲ့ဒီ့ပို့စျအောကျမှာတော့ အရှယျတငျနုပြိုမှုတှနေဲ့ လှသှေးကွှယျနဆေဲဖွစျတဲ့ မငျးသမီးခြောခငျဇာခွညျကြောျရဲ့ပုံရိပျလေးတှကေို ပရိသတျတှကေလညျး သဘောကကြာ အခစြျပိုအားပေးနကွေတာလညျး တှေ့ရပါတယျနောျ..။
႐ုတ္တရက္မထင္မွတ္ထားတဲ့ က်န္းမာေရးအေျခေနတစ္ခုေၾကာင့္ ေဆးရံုမွာ ေဆးကုသမႈခံယူေနရတဲ့ မိတ္ကပ္ခင္စန္းဝင္းအေၾကာင္းေလး..